काठमाडौं ।लगातार ३ दिन घटेको सुनको मूल्य आज भने एकै दिन ८ सयले बढेको छ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज ९३ हजार ९ सय कायम भएको छ । मंगलबार १७ सयले घटेको सुन बुधबार पनि १२ सयले घटेको थियो । विहिबार सुन १२ सयले घटेको थियो ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन तोलामा ९३ हजार ९ सयमा कारोबार भइरहेको छ ।यस्तै आज तेजावी सुन तोलामा ९३ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।यता चाँदीको मूल्य पनि आज प्रतितोला ४० रुपैयाँले बढेको छ । महासंघका अनुसार चाँदी आज प्रतितोला १,१६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
लगातार ३ दिन घटेको सुनको मूल्य आज भने एकै दिन ८ सयले बढेको छ । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज ९३ हजार ९ सय कायम भएको छ । मंगलबार १७ सयले घटेको सुन बुधबार पनि १२ सयले घटेको थियो । विहिबार सुन १२ सयले घटेको थियो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन तोलामा ९३ हजार ९ सयमा कारोबार भइरहेको छ ।
यस्तै आज तेजावी सुन तोलामा ९३ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यता चाँदीको मूल्य पनि आज प्रतितोला ४० रुपैयाँले बढेको छ । महासंघका अनुसार चाँदी आज प्रतितोला १,१६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
सुन बजार सुनसान
Prevमृत्यु भएको दुई दिनपछि कोरोना पुष्टि
पहिरोले भिरबाट बस खस्यो, एक जनाको मृत्युNext
यस वर्षको दशैंमा सुन बजार सुनसान, फाटफुट बाहेक कारोबार नै भएन
एकै दिन ९ सयले बढ्यो सुनको भाउ, कति छ आज ?
एकै दिन ८ सयले घट्यो सुन, कति छ आज ?
साताको पहिलो दिन घट्यो सुन चाँदीको मूल्य